Multi Cavity Mould Vagadziri uye Vatengesi - China Multi Mhango Mould Factory
Plastic jekiseni MAUMBIRWO
Custom Mould jekiseni richigadzirisa Custom High nemazvo ...
Custom OEM muforoma kugadzira mugadziri
Abs tsika jekiseni Kuumbwa kugadzira kambani
Custom muforoma gadzira uye dhizaini
8 masango emagetsi epurasitiki jekiseni muforoma
Vazhinji vatengi vanosarudza iyo yakawanda mhango mold nekuti inogona kuchengetedza mibairo yakawanda yekugadzira, asi usati waita sarudzo, unofanirwa kutarisa zvimwe zvinhu.
8 Mhango Plastic jekiseni Mould
Kana zvasvika kune dhizaini yeyako yakawanda-mhango jekiseni muforoma, kurongeka uye kuomarara ndiwo makiyi ehunhu hwapedza zvigadzirwa.
48 Mhango mudzimba midziyo yemagetsi jekiseni muforoma
Kana saizi yechigadzirwa iri diki, kazhinji inovaka makumi maviri nemana kana makumi mana nemakumi mana, zvinofanirwa kutaurwa kuti nei 30 kana 40 makomba asina kugadzirwa.
Izvi zvinodaro nekuti kuti uenzanise chimiro chekuumbwa uye zvinhu zvekuzadza chiyero, kunyanya muCold mumhanyi muforoma painenge ichishandiswa.
Chii chinonzi Multi Cavity Mould?
Iyo yakawanda-mhango muforoma jekiseni muforoma iyo ine inopfuura imwechete mhango yechikamu chimwe chete, uye chakuumbwa chakagadzirirwa kuburitsa huwandu hwechikamu chimwe chete panguva yega yega yekugadzira.
Multi-cavity jekiseni moulds inowanzo shandiswa kune yakakwira vhoriyamu zvigadzirwa sezvo ichikubvumidza iwe kuti ushandise zvinobudirira kushandisa iyo yekutenderera nguva uye kuburitsa zvimwe zvikamu kubva kune imwecheteyo mold mukati meiyo pfuti garandi.
Ndeapi Makomborero e Multi-Mhango jekiseni Mould?
Iyo yakawanda-mhango mold ine akawanda matanda muchikamu chimwe chete. Inogona kuburitsa huwandu hwakawanda hwezvikamu mune yega jekiseni kuumbwa kwekutenderera, iyo yakakodzera kwazvo kugadzirwa kwemazhinji. Zvimwe zvakanaka zviripo zvinosanganisira:
Ipfupi nguva yekuendesa: Sezvo zvikamu zvakawanda zvichigona kupedzwa mune yega yega kutenderera, zviga zvinogona kusvika nekukurumidza ..
Deredza mutengo weforoma: Zvichienzaniswa nekugadzira mana akapatsanurwa mafuru, kuumbwa kune ina matanda zvakachipa uye zvine yakaderera mutengo wevaridzi.
Yakaderera zvikamu zvemutengo: Yakazara yevashandi uye nguva yemuchina yemazhinji-mhango mafuru ipfupi, izvo zvinoderedza mutengo wezvikamu.
Order scalability: Izvo zvakaoma kusangana nechinodikanwa chemiriyoni imwe yemitezo ine imwechete mhango mhango. Multi-cavity molds inokutendera iwe kuti uise hukuru hukuru munguva.
Mufudzi Mumwechete VS. Multi-Cavity Mould, ndeipi yakanakira chirongwa chako?
Imwe chete mhango yekuumbika inoburitsa yakatenderera imwechete, nepo yakawanda-mhango muforoma inogadzira chinopfuura chimwe chigadzirwa padenderedzwa.
Muzhinji, kusarudza imwechete kana yakawanda mhango muforoma zvinoenderana nenguva yako yekuda uye kudiwa. Kana hombe vhoriyamu yakafanana zvikamu zvichidikanwa mukati meiyo yakatarwa nguva furu, yakawanda-mhango muforoma inowanzo kuve sarudzo iri nani. Multi-cavity mold molds inogonesa kugadzira zvimwe zvikamu, nekukurumidza mukati meiyo pfuti garandi.
Nekudaro, akawanda-mhango molds haisi iyo yakanyanya kunaka sarudzo kune ese mapurojekiti. Iyo yakawanda-mhango mold inoda yakanyanya kukura yekumberi kudyara pane imwechete-mhango mold. Izvo zvinodhura-zvinodhura kugadzira akawanda-mhango mafuru nekuti iwo anoda zvimwe zvinhu, vashandi, uye zviwanikwa zvemagetsi pane imwechete-mhango mold.
Kana uchigadzira zvikamu pamazana akakwirira, mari inoverengeka-jekiseni jekiseni muforoma inogona kubhadhara.
Asi pamazana ezasi, zvinogona kuita zvine musoro kutora kune imwechete-mhango mold.
Multi-Mhango Moulds VS. Mhuri Mhuri:
Ndeipi yakanakisa pane zvaunoda? Multi-cavity jekiseni kuumbwa dzimwe nguva kunovhiringidzwa nevemhuri jekiseni kuumbwa, asi iwo maviri akatosiyana.
Nepo mhuri jekiseni muforoma ichisanganisirawo akawanda matanda, iwo matanda haana kufanana, anoshandiswa kugadzira akasiyana zvikamu zvechigadzirwa mune imwechete kumhanya.
Kunyangwe homa yemhuri iinewo matanda mazhinji, zvikamu zvakagadzirwa zvinogovera saizi yakafanana asi akasiyana magadzirirwo. Semuenzaniso, kana chikamu chako chichida zvikamu zviviri zvakasiyana zvehukuru hwakaenzana, unogona kushandisa chishandiso ichi kuzvigadzira panguva imwe chete. Iyo ine zvakwakanakira zvakafanana zveyakawanda-mhango mold, asi ine zvimwe zvimwe zvakanaka.
• kudzikisa huwandu hwese hwekushandisa mabhajeti
Kubudirira kunowedzera kubva pazvinhu zviviri kana zvinopfuura zvakagadzirwa mujekiseni rimwe chete
Yakaderera-vhoriyamu odha kugona: mhuri jekiseni maumburu anodhura-anoshanda kune yakaderera-vhoriyamu maodha, sezvo asingade kumhanya akasiyana mafuru
• Yakakodzera prototyping, sezvo chigadzirwa chichigona kuunganidzwa zvizere pachishandiswa imwechete yemhuri mold prototype, inogona kudzikira pamutengo wekugadzira-kugadzirwa.
Nekudaro, nekuda kweakasiyana maumbirwo emakamuri ari muforoma yemhuri, zvinogona kuve zvakanyanya kuomarara kuchengetedza kusagadzikana panguva yekugadzirwa kwechikamu, zvichidaro zvichiwedzera njodzi yako yekuumba zvikanganiso.
Tsika Mould, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Mould Factory, Prototype Mould Vagadziri, Mould Vagadziri, Plastic Kuisa richigadzirisa,